‘झापामा चाँडै रङ्गीन अफसेट प्रेस’ - विवेचना
‘झापामा चाँडै रङ्गीन अफसेट प्रेस’
August 20, 2017 352 Views
युवराज डाँगी, अध्यक्ष : मुद्रण उद्योग संघ, झापा
अक्षर-अक्षर जोडेर लेटर प्रेसबाट सुरु भएको मुद्रण उद्योग समयान्तरसँगै आधुनिक बन्दै गएको छ । अफसेट प्रेसदेखि कम्प्युटरबाट सिधै कमान्ड हुने मेसिनहरु समेत पूर्वमा भित्रिइसकेका छन् । कामै-कामको चाप रहने र अनेकौँ समस्याले पिरोलिएको मुद्रण उद्योगका बारेमा विवेचनाले विषय उठान गर्ने प्रयास गरेको छ ।
२०६८ सालमा मुद्रण उद्योग संघ झापाका रुपमा मुद्रण व्यवसायीहरु सङ्गठित भए । पहिले माई पूर्व र माई पश्चिम भनेर छुट्टाछुट्टै भए पनि गोविन्द निरौलाको संयोजनमा यसलाई एकीकृत गरी समग्र झापाकै संघको रुपमा स्थापित गरिएको हो । जसको गणेश श्रेष्ठले स्थापनाकालीन नेतृत्व लिएका थिए । उनले दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि यो अभिभारा युवराज डा“गीले सम्हालिरहेका छन् । तेह्रथुमको आठराई वाकु-८ मा जन्मिएका डाँगी २०६० सालमा झापा बिर्तामोड आएका हुन् । सोही वर्ष उनले डाँगी प्रिन्टिङ प्रेस सुरु गरेर मुद्रण पेशालाई अँगाले । उनले छापाखाना सुरु गर्दा बिर्तामोडमा ६-७ वटा मात्र प्रेस थिए । त्यो पनि लेटर प्रेस र स्क्रीन प्रिन्टबाट मात्र काम हुन्थ्यो । पछि २०६७ सालमा उनले अफसेट प्रेसबाट काम सुरु गरे । मुद्रण क्षेत्रमा झन्डै डेढ दशक बिताएका र नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डाँगीसँग विवेचनाकर्मी एकराज प्रधानले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
झापामा मुद्रण व्यवसायीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
छपाई सम्बन्धी कामलाई पेशाका रुपमा लिने व्यवसायीहरु सयौँ छन् । तर, हाम्रो संघमा अहिलेसम्म ७० जना सदस्य हुनुहुन्छ । मुद्रण उद्योगमा ५०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । दक्ष कर्मचारीको अभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या पनि थुप्रै छन् । पुरानै दररेटमा अझै काम गरिरहनु परेको छ । मूल्यबृद्धि आकाशमा पुग्दा पनि छपाई रेट जहाँको त्यहीँ छ ।
मुद्रण व्यवसायीका मुख्य समस्या के हुन् ?
राज्यको नीतिले पनि हामी समस्यामा छौँ । भारतबाट छपाइका लागि सादा कागज ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने तर छापिएको सामान ल्याउँदा वास्तै नगर्ने काम हुन्छ । जसबाट हामी मुद्रण व्यवसायी मारमा परिरहेका छौँ । भारतका झोले व्यापारीहरुले छपाईका काम यहाँबाट लिएर जाने गरेका छन् । हुन त सस्तो उता हुन्छ, ग्राहकलाई सकेसम्म सस्तै चाहिने हो । तर, यहाँ भन्सार, कर तिरेर, कर्मचारी धानेर बसेका उद्यमी चाहिँ मारमा पर्छन् । त्यसैले या त कच्चापदार्थ ल्याउँदा भन्सारमा छुट हुनुर्पयो, कि त भारतमा छापिएर आउने सामान करको दायरामा ल्याइनु र्पयो । अर्को समस्या हो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको । दररेटमा फरक हुन्छ । काम तानातान हुन्छ । यसो हुन नदिन संघले न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
छपाईंको दरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुको कारण ?
एक त दररेट सम्बन्धी अनुगमन नै कहिल्यै हुँदैन । यहाँ मुद्रण व्यवसायमा आउने र छिट्टै हराउनेहरुले पनि दररेट बिगारिरहेका छन् । नयाँ आउँदा प्रतिस्पर्धाका लागि र ग्राहक तान्न सस्तोमा गरिदिने र ग्राहकमा यति सस्तोमा पनि हुँदो रहेछ त भन्ने भ्रम फैलाइदिनेहरु छन् । छपाई उत्पादन लागत खर्च कति हो भन्ने नै नबुझी पनि यो व्यवसाय गर्नेहरु छन् । अर्को कुरा, घरभित्रै काम गर्नेहरुले पनि यो समस्या पारिरहेका छन् । घरभित्र गर्दा उत्पादन लागत कम हुन्छ । कर्मचारी चाहिँदैन, कर तिर्नु पर्दैन । दर्ता नगरी घरभित्र छपाई गर्नेहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारले नीति लिनु पर्छ । भित्रभित्रै लाखौँको काम गर्ने र दर्ता भएका संस्थालाई मार्ने काम रोकिनु पर्छ । त्यस्तै, डेस्कटप सञ्चालकहरुका कारण पनि मुद्रण उद्योगीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । छपाई सम्बन्धी सबै काम गरिन्छ भनेर बोर्ड राखेर बस्ने र ग्राहकबाट महँगोमा काम लिएर सकेसम्म मुद्रण उद्यमीलाई सस्तोमा काम लाउने गर्दा पनि समस्या बढ्दो छ । जसलाई रोक्न स्वयम् मुद्रण उद्यमी नै जागरुक हुन जरुरी छ ।
मुद्रण व्यवसायीले स्थानीय तहसँग के अपेक्षा गरेका छन् ?
हाम्रो एउटै माग हो, मुद्रण सम्बन्धी काम बाहिर नजाओस् । यदि हाम्रो क्षेत्रको काम यहीँ गराउने हो भने कुनै पनि मुद्रण उद्यमी पलायन हुनुपर्दैन । स्थानीय कामबाटै भ्याइनभ्याइ हुन्छ । भन्सारमा छुट गराउनु र्पयो, झोले भारतीय व्यापारीलाई कडाइका साथ रोकिनु र्पयो । घरभित्र काम गर्नेलाई राज्यले करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । मुद्रण उद्योगी, कर्मचारीलाई पनि कहिलेकाहीँ तालिम सञ्चालन गराएर दक्ष बनाउन स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्छ ।
संघले सुरु गरेको ६ महिने अभियान कहाँ पुग्यो ?
हाम्रो नयाँ नेतृत्वले सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण तथा व्यावसायिक समस्याबारे छलफल गरी समाधानको उपाय खोज्न अभियान सुरु गरेको थियो । जसअन्तर्गत हामीले काँकरभिट्टा र भद्रपुरमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ । बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण रोकिएको छ । अब चाँडै नै बिर्तामोड, सुरुङ्गा, दमक र गौरीगञ्जमा यो अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौँ । हाम्रो यो अभियान उपलब्धिमूलक भएको छ, आबद्ध सदस्यहरु सक्रिय रुपमा लागिरहनु भएको छ ।
झापाका अधिकांश रङ्गीन छपाईका काम बाहिरिँदैछन्, यसलाई रोक्न सकिन्न ?
रङ्गीन प्रेसका लागि कम्तीमा २ करोड लगानी आवश्यक हुन्छ । जुन यहाँका मुद्रण उद्यमीका लागि अलिक गाह्रो हुनसक्छ । तर, हामी संघका सदस्यहरु मिलेर ल्याउने तयारीमा छौँ । रङ्गीन छपाई समयको माग पनि हो । एकल ल्याउँदा लगानी जोखिममा पर्न पनि सक्छ, मिलेर ल्याउँदा त्यो समस्या रहन्न । हिजो एउटा सानो म्याटरलाई लेटर प्रेसमा घण्टौँ लगाएर कम्पोज गरेर दुई दिन लाएर छापिन्थ्यो । अफसेट आएर आधा-एक घण्टामै छाप्न सकिने भएको छ । अब पर्चा, पम्प्लेट, बीलदेखि हरेक कुरा मल्टी कलर खोज्न थालिएको छ । त्यसैले एक्लै नसके पनि संयुक्त लगानीमा चाँडै नै मल्टी कलर प्रेसको योजना बन्दैछ ।
मल्टी कलर प्रेस ल्याए पनि प्रतिस्पर्धा सिधा काठमाडौँसँग हुन्छ, सक्नुहुन्छ ?
सकिन्छ । छपाईंका धेरै कच्चापदार्थ भारतबाट आउने हो । कागजदेखि हरेक कुरा । ढुवानी खर्च र समय बचतका कारण तुलनात्मक रुपमा ग्राहकलाई यहीँ सस्तो पर्न जान्छ ।
कच्चापदार्थको अवस्था के छ ?
अधिकांश कुरामा भारतकै भर पर्नु परेको छ । छाप्ने सामान नपाएर अभाव नै चाहिँ हुँदैन । तर, मेसिन बिग्रँदा चाहिँ भारतबाटै मेकानिक बोलाउनु पर्छ । जुन हाम्रा लागि खर्चिलो छ । राज्यले त्यस्तो खालको जनशक्ति उत्पादनमा पनि लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।
मुद्रण व्यवसायी पलायन पनि भइरहेका छन् नि ?
ठूलो कारण चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अर्को कारण हो लोडसेडिङ । काम गर्ने समयमा लोडसेडिङ भइदिँदा पनि धेरै मारमा थियौँ हामी । कर्मचारीले काम गर्नै नपाउने अनि उनीहरुलाई तलबै दिन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले लोडसेडिङको समस्या त हट्यो तर कर्मचारी तानातान अर्को समस्या देखियो । १-२ हजार बढी दिएर कर्मचारी तान्ने, भड्‌काइदिने काम भए । अहिले संघमा नबुझी एउटाबाट निस्किएको कर्मचारी अर्कोमा राख्न पाइँदैन । यसलाई केही हदसम्म रोक्ने प्रयास गरिँदैछ । दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण पनि मुद्रण उद्यमी डुबेका छन् । नयाँ डुब्नुको कारण चाहिँ हिसाब गर्न नजानेर पनि हो । उत्पादन लागत कति र आफूलाई नाफा कति भन्ने हिसाब गर्न नसक्नेहरुले यो पेशा अँगाल्दा पनि घाटामा जाने गरेका छन् । बजार भाउ, कच्चापदार्थको दर सबैकुराको हिसाब गर्न नजान्दा पनि फस्ने गरेका छन् । त्यसैले यो पेशामा नयाँ आउनेहरुले कम्तीमा छपाई सम्बन्धी हिसाब जान्नुपर्छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जोगिन सक्नुपर्छ ।
Previous अर्काको नाममा कर तिर्छन् इलामका चिया मजदुर
Next आगो‌ले‌ जले‌की लक्ष्मीको‌ उपचार‌मा सहयो‌ग जुट्दै‌